OMA: Varotra marketing sy lova fitaterana fifamoivoizana | Martech Zone
OMA: Varotra Marketing Marketing and Traffic Generation Platform
Alarobia 28, 2013 Talata, Aogositra 27, 2013 Douglas Karr
Organic Marketing Analytics (OMA) dia sehatra Marketing Marketing sy Traffic Generation ho an'ny mpivarotra orinasa. Ny fampiharana dia manampy ny mpivarotra atiny hifindra avy amin'ny "inst inst" ary handray fanapahan-kevitra "data driven" na dia manaisotra ny fanaintainana aza amin'ny fanaovana marketing atiny.
Manampy anao hahatakatra tsara kokoa ny mpihaino anao ny OMA, manamora ny famoahana atiny ary manatsara ny atiny ho an'ny tratran'ny voajanahary. Ary, OMA mandeha ho azy mandeha ho azy ny fitadiavana sy ny fanaovana fitaomana manan-kery sy ny olona manerana ny karoka, sosialy, bilaogy, tranokalam-baovao, forum sy Q&A tranonkala.
Raha ny tena izy, OMA dia manamora ny fanatanterahana ny tanjon'ny marketing amin'ny atiny - ny fampianarana ny mpanjifanao sy ny fitondrana azy ireo hitsidika ny tranonkalanao. Noho izany, afaka mitondra fifamoivoizana bebe kokoa ianao ary mamokatra ROI mafy amin'ny ezaka ataonao… ao anatin'ny fotoana fohy kokoa.
Fanaraha-maso ny laharana domain
Endri-javatra lehibe an'ny OMA
Rechercher Keyword - Ny fahaizan'ny fikarohana ny teny OMA dia manome fomba maro hahitana ireo teny lakile mety kendrena amin'ny tetikasanao. Ankoatry ny famakafakana ny teny lakile fototra, ny OMA dia mitrandraka tokana ny atiny sy ny resaka eny an-tsena mba hahitana tsy tapaka fanararaotana teny fanalahidy fanampiny.
Fikarohana mpifaninana - Saika ny fampahalalana rehetra ao amin'ny lampihazo azo alaina ao amin'ny tranokalanao ary ny ezaka dia arahana ho an'ireo mpifaninana ihany koa. Manome anao fahitana tsy manam-paharoa amin'ny ataon'ny fifaninanana ataonao izany. Manomboka amin'ny sosialy ka hatramin'ny backlinks, ny laharana fikarohana amin'ny tambajotra doka ary mandany, ny OMA dia manampy anao hamantatra ny fomba ahazoan'ny mpifaninana valiny ary manampy anao hifanaraka / handresy azy ireo.
Search Engine Optimization - Niorina ho OMA dia fitaovana SEO kilasy orinasa. Manomboka amin'ny fanatsarana ny tranokala, amin'ny famakafakana ny backlink, amin'ny fanarahana laharam-pahamehana sy ny fitantanana ny laharam-pahamehana ary ny fanarahana, OMA dia manome anao izay rehetra ilainao mba hahatonga ny voajanahary hahatratra avo indrindra.
Fihainoana ara-tsosialy - OMA dia manara-maso ny fantsona lehibe rehetra sy ny tambajotra sosialy, eny fa na dia ny bilaogy, ny forum ary ny tranokalam-baovao aza. OMA mahita ireo tenifototra voalaza etsy ambony ho an'ny teny lakileo. Ary, amin'ny fanaraha-maso ny teny lakile dia ho hitantsika hoe iza no manonona betsaka indrindra ary iza no noresahana indrindra. Isaky ny voatonona tsirairay dia fantarintsika raha ao anatin'ny toe-javatra miabo / miiba / tsy miandany izany.
Fikarohana Influencer - OMA dia mamantatra sy manome isa voalaza amin'ny fampiasana metatra 20+ hahitana ireo fitaomana manan-kery indrindra amin'ny isam-pokontany. Ny influencer rehetra dia voamarika ho an'ny teny lakile sy vondrona teny lakile ho mora karohina. Ho an'ny influencer tsirairay dia mahita fampahalalana mifandraika avy amin'ny tranokalany sy loharano hafa an-tserasera izahay.
Fitantanana ny asa fitoriana - Miara-miasa amin'ireo mpamatsy mailaka iraisana izahay mba hahitan'ny mpampita hafatra anao amin'ny toerana iray ny fifandraisanay. Mampiantrano mailaka modely amin'ny toerana iray. Fitantanana ny fomba CRM. Databatra fifampizarana zaraina ho an'ny mpampiasa rehetra ao anatin'ny tetikasa tsirairay.
Tetikasa sy fitantanana asa - ao anatin'ny kaonty tsirairay dia azonao atao ny mamorona tetikasa marobe amin'ny tranokala, vokatra / serivisy na fampielezana samihafa. Mamorona sy manome andraikitra ao anatin'ny tetik'asa amin'ireo mpampiasa hafa. Manome fahazoan-dàlana hiantohana ny fisarahana raha ilaina izany.
Ny vidiny dia mifaninana. HO AN'NY Hubspot mpampiasa natolony ny fidirana amin'ny OMA amin'ny $ 249 / volana. Manolotra drafitra manokana ho an'ny tsy mitady tombony sy ny hafa ihany koa izy ireo mifototra amin'ny filàna manokana.
Tags: AnalyticsFikarohana mpifaninanaFikarohana Influencerfikarohana siantifikaAnalytics amin'ny varotra voajanaharyFitantanana ny asa fitorianafitantanana tetik'asafikarohana OptimizationSEOfihainoana ara-tsosialyfitantanana asa
Ny fanadihadiana CMO - Aogositra 2013
Aug 28, 2013 amin'ny 10: 13 AM
Araho maso ny vokatrao ara-tsosialy, fa aza adino ny ezaka SEO anao. Tsy azonao adino koa, tadiavo ny mizana.